Fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Filoha vaovaon’ny Anjery Manontolo eto Antananarivo – Sénat de Madagascar
Notanterahina teny amin’ny Esplanade Ankatso ny alakamisy 23 mey 2019 ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny Filoha vaovaon’ny Anjery manontolon’Antananarivo, ireo Sojabe, ireo Talen’ny Sekoly Ambony ary ireo Talen’ny Fampianarana Ambony. Nanome voninahitra izany fotoana izany ireo Loholon’i Madagasikara izay notarihin’ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO, ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ary ny Minisitry ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa.
Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-711 dia voatendry ho Filohan’ny Anjery Manontolon’Antananarivo ny Profesora RAVELOMANANA Mamy Raoul ary araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-866 dia voatendry ho Sojaben’ny «faculté de l’ Economie, de Gestion et Sociologie » : ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy, Sojaben’ny « Faculté de Droit et des Sciences Politiques » : ESOAVELOMANDROSO Faratiana Manassé, Sojaben’ny « Faculté des lettres et des Sciences Humaines » : RALINIRINA Fanja Tahina, Sojaben’ny « Faculté des Sciences » : RAMAHAZOSOA Urrish Parker, Sojaben’ny « faculté de médecine » : VOLOLONTIANA Hanta Marie Danielle, Talen’ny « Ecole Polytechnique d’Antananarivo » : RAKOTOSAONA Rijalalaina, Talen’ny « Ecole Supérieure des sciences agronomiques » : RAMAMONJISOA Bruno Salomon, Talen’ny « Ecole Normal Supérieur d’Antananarivo » : RAMANAMBELINA Henriette, Talen’ny «Institut d’ Enseignement Supérieur » Soavinandriana Itasy : RAKOTOMAHEVITRA Andrianelison, Talen’ny « Institut d’Enseignement Supérieur » Vakinakaratra : RAJAONARISON Eddie Franck.
Fahamarinana, Fangaraharana ary Fampihavanana io no teny filamatrin’ny Filohan’ny anjery manontolon’Antananarivo. Mandritra ny fitondrany dia laharam-pahamehana ho azy ny fanaovana tamberin’andraikitra amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny fitantanana, ny fanavaozana ny foto-drafitrasa, ny fametrahana angovo azo havaozina mba hahafahan’ny Anjery manontolo mahaleotena amin’ny fampiasana jiro sy rano, fanomezan-danja ny fikarohana sy ny fitsidihana eny anivon’ireo sehatra tsy miankina (fampiharana ny fikarohana amin’ireo sehatra ireo). Manoloana ireo vina ireo dia nanentana ny tsirairay ny Filohan’ny Anjery Manontolo RAVELOMANANA Mamy Raoul ny mba hifanome tanana amin’ny fampivoarana ny fampianarana eo amin’ny Anjery manontolo.
Fanatsarana ny vokatrin’ny Anjery manontolo, fanafoanana ny kolikoly, fanitarana ny fikarohana ara-tsiansa ary fanomezan-danja ny fahaiza-manao sy ny voka-pikarohana eo amin’ny sehatry ny asam-panjakana isan’ambaratonga, ireo no tanjon’ny politikam-panjakana ho amin’ny fampianarana mba hahafahana mampandroso ny Firenena hoy ny Minisitry ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiantifika Félicitée Madeleine Rejo FIENENA.
Nisy ny fanomezana marim-pahatsiarovana avy amin’ny Filohan’ny Anjery manontolon’Antananarivo ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana nasaina nadritra io fotoana io.